‘ब्याज तिर्न थप ऋण दिँदा खराब कर्जा लुक्यो’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ‘इभरग्रिनिङ’ का उजुरी बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अनसाइट सुपरिवेक्षणमा पनि बैंकमा केही कर्जामा दुई इभरग्रिनिङ भएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । ती केहीलाई प्रोभिजन गर्न लगाएका छौं । बाँकीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाएका छौं । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा १.७४ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.६९ प्रतिशत थियो । यही अनुपातमै आईएमएफले शंका गरेको छ । प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०९:३९
विमानले खाली गरेकाे इन्धन लस एन्जलसको विद्यालयमा खस्यो, २६ घाइते
लस एन्जलस — इन्जिनमा खराबी देखिएपछि अमेरिकाको लस एन्जलस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेल्टा एयरलायन्सको विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराइएको छ । मंगलबार लस एन्जलसबाट चीनको सांघाईका लागि उडान भर्नेबित्तिकै विमानको इन्जिनमा प्राविधिक गडबडी देखिएपछि इन्धन खाली गरी आकस्मिक अवतरण गराइएकाे थियाे ।
विमानबाट इन्धन फ्याँक्ने बेलामा पार्क एभिन्यू प्राथमिक विद्यालयका १७ विद्यार्थीसहित २६ जना घाइते भएको रोयटर्सले जनाएको छ । घाइतेमध्ये ९ जनालाई अस्पताल लगिएको छ भने १७ जना सामान्य घाइते भएको जनाइएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार विमानबाट खाली गराइएको हवाई इन्धन विद्यालयको खेलमैदानमा खसेको थियो ।
‘फ्लाइट ८९ले लस एन्जलसबाट सांघाईका लागि उडान भर्नेबित्तिकै इन्जिनमा प्राविधिक समस्या देखियो । इन्धन खाली गरेपछि एयरलाइन्स सुरक्षित रुपमा अवतरण भयो । यस्तो अवस्थामा इन्धन खाली गरिनु सुरक्षित अवतरणका लागि सामान्य प्रक्रिया हो,’ एयरलाइन्सले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
This isaDelta flight appearing to dump fuel overaprimary school before landing in LA this morning.
70 firefighters and paramedics are on the scene assessing those affected. @9NewsAUS
— Charles Croucher (@ccroucher9) January 14, 2020
अमेरिकाको नागरिक उड्डयन प्रशासनले भने घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । इन्धन खाली गर्ने क्रममा डेल्टा एयरलाइन्सले नियम पालन नगरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा मानव बस्ती नभएको ठाउँमा इन्धन खाली गरिन्छ । विमानको इन्धन खाली गरेर आकस्मिक अवतरण गर्नुपरेमा ‘हाई अल्टिच्यूड’ बाटै मानव बस्ती नभएको ठाउँमा इन्धन फ्याँकिन्छ ।
प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०९:३२